FLV and F4V bangabantu izakhiwo ezimbili ezahlukene ifayela ividiyo, okuyinto babaziwa ngokuthi Flash Ukugunda. Zivame yasetshenziswa njengesisekelo isitsha ukuletha ividiyo phezu internet. Amavidiyo wayibuka inthanethi kanengi FLV noma F4V format. Kwabanye freeware, wena kalula thwebula lezo videos inthanethi kwikhompyutha.
Nokho, FLV Ifomethi ayisekelwa eminingi smartphone kanye amaphilisi, ezifana iPhone, iPod, iPad, Amafoni HTC njll. Ngakho sidinga isisombululo ukuguqula FLV kuya MP4, njengoba MP4 iyi-ehambisanayo cishe yonke idivayisi ephathekayo.
Thina uzobona 2 izindlela ukuguqula FLV/F4V kuya MP4 mahhala
Method 1: Indlela ukuguqula FLV ukuze MP4 ne ibhuleki lesandla
Ibhuleki lesandla iyi-edumile umthombo ovulekile video transcoder, it ukusekela cishe bonke ifomethi input bese okuphumayo in MP4 and MKV. Futhi kungaba ugijime on Imiganga (Amawindi, Mac and Linux). Manje landela izinyathelo.
1. Download ifomu ibhuleki lesandla lapha bese uyifake.
2. Hola lolu hlelo bese uchofoze "Umthombo" > "Vula ifayela", akhethe ifayela FLV ofuna ukuguqula.
3. Chofoza "Dlulisa amehlo"Ukukhetha indlela lapho uya khona kukhompyutha yakho.
4. Khetha "MP4"In the Izilungiselelo lokukhipha. At ilungelo hlelo, ungakhetha i-Preset for idivayisi noma jikelele.
5. Chofoza "Qala"Phezulu, balindele kwaqedwa inqubo ukuguqulwa.
Method 2: Indlela ukuguqula FLV ukuze MP4 besebenzisa VLC Media Player
VLC iyi-mahhala futhi ovulekile umthombo project. Kuyinto a-platform cross (Amawindi, Mac and Linux) multimedia umdlali kanye nohlaka lokuthi udlala amafayela soxhumanoningi kunazo kanye DVD, CD Audio, VCD, namavidyo various.
Futhi ubuye ividiyo Converter elula, kuyosisiza ukuba transcode amafayela FLV.
1. Chofoza lapha ukulanda VLC Media Player.
2. Chofoza le Media imenyu phezulu VLC, khetha Ukuguqula / Sava.
3. Khetha ifayela ngokuchofoza "Engeza ..."Inkinobho in the ithebhu ifayela bese Chofoza" inkinobho Guqula / Gcina "ngezansi.
4. Chofoza imenyu drop-phansi bese ukhetha Ividiyo - H.264 + MP3 (MP4) iphrofayli ohlwini. Bese uchofoze "Dlulisa amehlo"Inkinobho, indlela eya lapho ifayela MP4 iwukuba basindiswe.
5. Chofoza le "Qala"Inkinobho bese ulinda nenqubo ukuguqulwa eseqedile.
Isiqophi Converter Ultimate - A shareware eklanyelwe ukuguqula DVD and Isiqophi ifayela, ashise video DVD bese thwebula imiqophi inthanethi, wireless ukudlulisa ama kumadivaysi ephathekayo.
Posted on May 17, 2014 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba Video / Audio SolutionAmathegi ukuguqula flv kuya mp4, ukuguqula flv ukuze Mp4 mahhala, flv kuya mp4 Converter
Langaphambilini post Previous: Indlela ukuguqula DVD movie ku-Kindle Fire HD / HDX
Next post Next: Indlela ukubeka iPhone yakho, iPad and iPod touch in mode DFU